TI Nepal message – International Anti-corruption Day – 2017 - Transparency International Nepal
TI Nepal message – International Anti-corruption Day – 2017
भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् २०१७ को सन्दर्भमा टीआई नेपालद्वारा जारी गरिएको सन्देश
डिसेम्बर ९, अर्थात् भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यस पटक पनि यो दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । वार्षिक रुपमा मनाइने यो दिवसले हामी सबैलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न थप उत्साह प्रदान गर्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारले मानव समुदायमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसके यसले राज्य संयन्त्रलाई निष्प्रभावि बनाउँछ भन्ने सर्व विदितै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानले संवैधानिक एवं कानूनी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरे पनि ती निकायहरुले खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशद्वारा प्रकाशित सीपीआई सर्वेक्षणहरुमा विद्यमान नेपालको स्थितिबाट प्रमाणित भइरहेको छ । यति हुँदैहुँदै पनि राजनैतिक दल एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संस्थाहरुले यस विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पनि ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको पाइएको छैन । भ्रष्टाचारलाई घटाउँदै लाने दृढ कार्ययोजनाको अभावमा नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको रुपमा सबैका सामु चित्रित भइरहेको छ ।
संविधानसभाबाट पारित भई लागू भएको संविधानको पूर्णकार्यान्वयन भर्खरै सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात् भएको छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले उब्जाएको अराजकता र परिणाम स्वरुप बढ्दो भ्रष्टाचार अबका दिनमा घट्दै जाने विश्वास आमजनताले लिएका छन् । वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारहरु पनि क्रियाशील छन् । संघीय सरकार एवं प्रादेशिक सरकारहरु पनि गठन हुने क्रममा छन् । क्रमिक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनतर्फ मुलुकलाई डो¥याउन संघीय संसद एवं त्यसको उपजको रुपमा गठन हुने सरकारलाई अब सहज हुने अपेक्षासमेत गर्ने वातावरण अहिले सिर्जना भएको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै राजनीतिकवाद वा शासन व्यवस्थासम्म मात्र सीमित छैन । हाम्रा छिमेकी देश भारत एवं चीनमा पनि व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । साम्यवादी शासन व्यवस्था भएको चीन र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको भारत दुवैलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा २०१६ मा प्रकाशित तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकांकमा दुवै देशले ४० अंक पाएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा प्राप्त गरेको २९ अंक भन्दा अझै सुधार गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामका लागि ठोस कदम अवलम्बन गर्न अहिले उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको अवस्था छ । तसर्थ यस्तो दयनीय अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा हाम्रो चिन्तन केन्द्रित गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न बनाएको रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१३–२०१७ को कार्यावधि सकेर अब सन् २०१८ देखि लागू हुने गरी अर्को पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका क्रममा जुटिरहेको छ । टीआई नेपालको रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०२२ लागू हुने र मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने संयोग एकै पटक परेको सन्दर्भलाई हामीेले शुभ संकेतका रुपमा लिएका छौं ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि ठोस आधारहरु तयार गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई कसरी नैतिक शिक्षा दिने ? राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कसरी चरित्रवान बनाउने ? संवैधानिक अंगहरुलाई कसरी संस्थागत रुपमा सक्षम सुदृढ एवं आफैंमा स्वतन्त्र बनाउने ? नियमनकारी निकायहरुलाई कसरी विश्वासिलो एवं भरपर्दो बनाउने ? सेवाग्राहीहरुलाई कसरी स्वच्छ प्रशासनका माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने ? जस्ता विविध विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ हरेक क्षेत्रमा सदाचार प्रवद्र्धन गर्न के कसो गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने क्रमसँगै मुलुकलाई विकासको पथमा विधिसम्मत रुपले डो¥याउने वातावरण बनिरहेको अहिलेको अवस्थाबाट अब जनताको स्थिति सुध्रनै पर्छ । अर्को वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको यो दिवस मनाइरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै गएको संकेत पाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनतर्फ मुलुकलाई अब गठन हुने संसद र सरकारले उच्चप्राथमिकता साथ आफ्ना कार्ययोजना विकासित गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकोस्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको शुभकामना छ ।
२०७४ मंसिर २२